Prudential x SuperM | Prudential Myanmar
PRUHealth Prevent & Protect
ပြည်သူတွေ ကျန်းမာပျော်ရွှင်စွာနေထိုင်နိုင်ရေး ကူညီပေးနိုင်ဖို့ ကေပေါ့ပ်အဖွဲ့နဲ့ မိတ်ဖက်ပူးပေါင်းမှု
အရင်ကနဲ့မတူတဲ့ ကျန်းမာပျော်ရွှင်ရေး အတွေ့အကြုံ
ကျန်းမာရေးကို အထူးအလေးပေးနေကြတဲ့ ကမ္ဘာကြီးမှာ အမြဲ ရှေ့ရောက်နေဖို့ #ဒို့တွေတကယ် ကျန်းမာပျော်ရွှင်အောင်နေကြတယ် ဆိုတဲ့ ခရီးစဉ်မှာ ပါဝင်လိုက်ပါ။ ပိုကျန်းမာဖို့အပြင် အရေးအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ကို ဦးတည်ပြီး သင့်ရဲ့ ကခုန်ခြင်း ခရီးစဉ်ကို စတင်လိုက်ပါ။
#WeDO ခရီးစဉ်ရဲ့ အမှတ်တရတွေကို ကြည့်ရှုခံစားလိုက်ပါဦး။
ကန့်လန့်ကာ နောက်ကွယ်ကနေ မဆုတ်မနစ် ကြိုးစားခဲ့သူတွေကစပြီး ကမ္ဘာ့အဆင့် ဂီတဖျော်ဖြေပွဲကြီး ကျင်းပနိုင်တဲ့အထိ ဒီခရီးစဉ်တလျှောက်မှာ မဖြစ်မနေ ကြည့်သင့်တဲ့ အခိုက်အတန့်တွေကို လက်မလွတ်သွားစေနဲ့နော်။
‘We DO’ သီချင်းဗီဒီယိုမိတ်ဆက် (၁)
SuperM - အကောင်းတစ်ကာ့ အကောင်းဆုံး တစ်ခုခု ရောက်ရှိလာပါတော့မယ်။
‘We DO’ သီချင်းဗီဒီယိုမိတ်ဆက် (၂)
SuperM ရဲ့ သီချင်းအသစ်ဖြစ်တဲ့ "We DO" က အားလုံးရှေ့ကို မကြာခင်ရောက်ရှိလာတော့မှာပါ။
SuperM ရဲ့ "We DO" သီချင်းဗီဒီယို
ပရူဒန်ရှယ်အာမခံနဲ့ SuperM တို့ ပူးပေါင်းတင်ဆက်တဲ့ နောက်ဆုံးထွက် သီချင်းဗီဒီယိုအသစ်
"We DO" သီချင်း ဗီဒီယိုရိုက်ကွင်းနောက်ကွယ်
SuperM ရဲ့ သီချင်းအသစ်ဖြစ်တဲ့ "We DO" ဗီဒီယိုရိုက်ကူးရေးနောက်ကွယ်က အထူးဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတွေကို ကြည့်ရှုလိုက်ပါ။
SuperM နဲ့အတူ လိုက်ဆိုကြရအောင်
SuperM WE DO lyrics
New school eight track flow, In digital (Takeabite of the future, 21st century now, c’mon).
Shining bright like gold That’s how we roll (Can you feel it now?)
Oh yeah (Can you feel it now?)
And when we start it up we can’t stop
Gonna move til we lose it
When the beat drops uh huh (Makin’ everybody dance now)
Un huh (Makin’, makin’ everybody dance now)
If it feels good, we do it (We do it)
Come on move like we move it (We do it)
If it feels good, If it feels good
If it feels good, we do it (Hey!)
Come on now everyone (Let’s all)
Run around in the sun (Let’s all)
Ride the vibe side to side
Now we’re havin’ fun
Do it right live it up (Let’s all)
Now we are having fun hey
That’s how we do (Feel that)
How we do (Can you feel it for that)
How we do (Feel that)
Hey! Ha, ha, we gon’ ride
All together now, There’s nothing we can’t do (Work it out now)
Ya Work it out right now (Real tight, c’mon)
Cuz we all came to run this
Didn’t come this far for nothing
We all here for just one thing
And now we bout’ to live it up
If it feels good, we do it
Now we’re having fun (Let’s have some fun now)
Now we’re having fun (C’mon now everyone)
That’s how we do (Now can you feel it for that)
How we do (Now can you feel it for that)
How we do (See, can you feel it for that)
Come on now everyone
Now we’re having fun
Speakers out the window
Bass go where the wind blow
Get up live your best life
Show them what it looks like
Hey, we gon’ ride
*Post-chorus 1 Repeat*
Everyone come on now
Now let’s have fun
SuperM ရဲ့ အကလေ့ကျင့်ခန်း‌တွေကို ကြည့်ရှုခံစားလိုက်ပါ
SuperM အဖွဲ့ဝင်တွေက ‘WE DO’ chorus အပိုဒ်မှာ ဘယ်လို #WeDO ခံစားမှုရအောင် ကသွားတာလဲ ဆိုတာကို ပြပေးပါလိမ့်မယ်။
ကျွန်တော်တို့က ပုံမှန်လောက်ပဲ လုပ်ကြတဲ့သူတွေ မဟုတ်ပါဘူး။ #ကျွန်တော်တို့ တကယ် အံ့သြစရာကောင်းတဲ့ ရလဒ်တွေရအောင် အတူတူ လက်တွဲလုပ်ကိုင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့က တစ်ခုခုကို လိုချင်ရင် #ကျွန်တော်တို့ လုပ်နိုင်တာမှန်သမျှ တကယ် အကုန်လုပ်ပါတယ်။
- ကျွန်တော်တို့က အပြောပဲ မဟုတ်ပါဘူး။ #ကျွန်တော်တို့ တကယ် လက်တွေ့လုပ်ပါတယ်။
တက်ကြွတဲ့ခွန်အားတွေ မျှဝေပြီး ကိုယ်တကယ် မြတ်နိုးတဲ့အရာအတွက် ကြိုးကြိုးစားစား အလုပ်လုပ်ကိုင်တာက #ကျွန်တော်တို့ တကယ်လုပ်တယ်ဆိုတာ ဖော်ပြနေတာပါ။
ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတူ အခုပဲ ပျော်စရာတွေ ဖန်တီးရအောင်
တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ ပိုကောင်းတဲ့လူတွေ ဖြစ်လာဖို့ ကျွန်တော်တို့ ဘာမဆို တစ်ကယ် ကြိုးစားလုပ်ဆောင်ပါတယ်။
ကျန်းမာရေးအတွက် လုပ်ရတာ ပျော်စရာမကောင်းဘူးလို့ ဘယ်သူပြောလဲ?
SuperM က ပရိသတ်တွေ လိုက်ကထားတဲ့ “We DO” ကို ဘယ်လို တုံ့ပြန်ထားလဲဆိုတာ ကြည့်ရှုပါ
ပရိသတ်တွေက #WeDO အစီအစဉ်မှာ ပါဝင်ပြီး သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် #WeDO ကကွက်ဆန်းတွေနဲ့ ကေပေါ့ပ်ကြယ်ပွင့်တွေကို ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစေခဲ့ပါတယ်။
Best Solo Dance
SuperM နဲ့ ပူးပေါင်းတင်ဆက်လိုက်တဲ့ တစ်ဦးချင်း #WeDO အကပြိုင်ပွဲက အကောင်းဆုံး ကကွက်တွေကို ကြည့်ရှုခံစားလိုက်ရအောင်။ ဘယ်သူက အလန်းဆုံး ကပြတင်ဆက်ခဲ့လဲဆိုတာကြည့်ရင်း ဒီထဲမှာ သင်ကိုယ်တိုင်လည်း ပါဝင်နေမလားဆိုတာ စောင့်ကြည့်လိုက်ပါဦး။
Best Group Dance
စုပေါင်းအင်အားနဲ့ အိပ်မက်တွေထဲကအတိုင်း ဘယ်လို အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ခဲ့လဲ။ အဖွဲ့လိုက် #WeDO အကဗီဒီယိုတွေထဲက အကောင်းဆုံးအဖွဲ့တွေကို SuperM က ဘယ်လိုတုံ့ပြန်ခဲ့လဲဆိုတာ ကြည့်လိုက်ပါဦး။
အထူးပြုလုပ်ချက်တွေလား၊ ဆန်းပြားတဲ့ အပြင်အဆင်တွေလား၊ ဒီအကသမားတွေအတွက်တော့ သိပ်ပြီး အထူးအဆန်းဖြစ်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ SuperM နဲ့ ပူးပေါင်းတင်ဆက်လိုက်တဲ့ #WeDO အကဗီဒီယိုတွေထဲက တီထွင်ဆန်းသစ်မှု အရှိဆုံးသူတွေကို ကြည့်လိုက်ရအောင်။
Most Unique Costume
#WeDO ကို one-piece ဝတ်စုံနဲ့လား၊ အထူးခြားဆုံး ဝတ်စားဆင်ယင်သူက ဘယ်သူများဖြစ်မလဲ။ အကပြိုင်ပွဲမှာ အပျံစားဝတ်စုံတွေ၊ အလန်းဆုံး ဆင်ယင်မှုတွေကို SuperM က ဘယ်လိုတုံ့ပြန်ခဲ့လဲ ကြည့်လိုက်ပါဦး။
Best #WeDO Spirit
#WeDO ရဲ့ အကောင်းဆုံး ခံစားသက်ဝင်မှုဆိုတာ စိတ်ခံစားချက်တွေ ကောင်းမွန်လာဖို့ပါပဲ။ အကပြိုင်ပွဲထဲမှာ ကောင်းမွန်တဲ့ စိတ်ခွန်အားတွေ ပေးစွမ်းနိုင်တဲ့ ဗီဒီယိုတွေကို SuperM က ဘယ်လိုတုံ့ပြန်ခဲ့လဲဆိုတာ ကြည့်လိုက်ပါစို့။
အာရှဒေသမှာရှိတဲ့ ပရူဒန်ရှယ်အာမခံ customers များနဲ့ ပရိသတ်များအတွက် အထူးသီးသန့်ဖျော်ဖြေပွဲအစီအစဉ်
Prudential နဲ့ SuperM တို့ရဲ့ We DO အွန်လိုင်းဖျော်ဖြေပွဲ နဲ့ ပရိသတ်များနှင့်တွေ့ဆုံပွဲ
ကေပေါ့ပ်ကြယ်ပွင့်တွေက We DO အွန်လိုင်းဖျော်ဖြေပွဲနဲ့ ပရိသတ်များနှင့်တွေ့ဆုံပွဲမှာ တိုက်ရိုက် live လွှင့်ပြီး ခွန်အားအပြည့်နဲ့ အမိုက်စား ကပြဖျော်ဖြေတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကြောင့် အာရှမှာရှိတဲ့ ကံကောင်းတဲ့ ပရိတ်သတ်တွေအတွက် “ဒို့တွေတကယ် ကျန်းမာပျော်ရွှင်အောင် နေကြတယ်” အစီအစဉ်လေးက လှပတဲ့ အမှတ်တရ‌ကောင်းလေးတစ်ခု ဖြစ်စေမှာပါ။
SuperM exclusive We DO live performance
SuperM နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ နောက်ဆုံးရ အထူးသတင်းတွေကို မျက်ခြေမပြတ်ပါစေနဲ့။
Prudential x SuperM ရဲ့ နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်
#15-01, 15th Floor, Sule Square, 221 Sule Pagoda Road, Kyauktada Township, Yangon, Myanmar
(+95) 977 011 0010
Prudential Myanmar Life Insurance Limited is an indirect subsidiary of Prudential plc. Neither Prudential Myanmar Life Insurance Company Limited nor Prudential plc is affiliated in any manner with Prudential Financial, Inc,acompany whose principal place of business is in the United States of America or with Prudential Assurance Company,asubsidiary of M&G plc,acompany incorporated in the United Kingdom.
Copyright 2019 Prudential Myanmar Life Insurance Limited. All rights reserved.